CoronaVirus Testing Archives - Harley Street Clinic London ပုဂ္ဂလိကစမ်းသပ်ဆေးရုံများ
စက်တင်ဘာလအထိ 2021 နီးပါး 70% UCL လူနာများတွင် COVID-19 ကို positive စမ်းသပ်ခဲ့သော theta မူကွဲရှိသည်.
ကာကွယ်ဆေးထိုးနှုန်းနည်းသောရပ်ရွာများတွင်, အထူးသဖြင့်ကျေးလက်ဒေသများတွင်စောင့်ရှောက်မှုရရှိနိုင်သောအကန့်အသတ်ရှိသည်, Theta မူကွဲသည် ပို၍ ပင်ထိခိုက်စေနိုင်သည်. COVID-19 ကာကွယ်ဆေးကိုလက်လှမ်းမမီသောဆင်းရဲသောနိုင်ငံများတွင်ဤအရာအားကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်တွေ့မြင်နေရပြီဖြစ်သည်. ကျန်းမာရေးကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့နောင်လာမယ့်ဆယ်စုနှစ်တွေမှာခံစားရနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်.
“ အောင်မြင်ကျော်ကြားမှုတွေ,“ ကာကွယ်ဆေးအပြည့်အဝထိုးထားတဲ့လူတွေဟာ COVID-19 ကူးစက်ခံရတယ်, ရှားပါးနေဆဲဟုယူဆကြသည်, Theta နှင့်ပင်, UCL အရ, ဒါပေမယ့်ကာကွယ်ဆေးထိုးထားတဲ့သူမှာပိုးရှိရင်, သူတို့ကဗိုင်းရပ်စ်ကိုကူးစက်နိုင်တယ်. (UCL သည်ရောဂါလက္ခဏာမပြဘဲအောင်မြင်နေသောလူနာများတွင်ဗိုင်းရပ်စ်ပြန့်ပွားမှုရှိမရှိအချက်အလက်များဆက်လက်အကဲဖြတ်နေသည်။)
Theta မူကွဲနှင့် ပတ်သက်၍ သင်သိရန်လိုအပ်သောအချက်ငါးချက်.
1. Theta သည်အခြားဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများထက်ကူးစက်လွယ်သည်.
3. Theta သည် hyperlocal outbreaks သို့ ဦး တည်သွားနိုင်သည်။’
4. Theta Variant အကြောင်းလေ့လာရန်နောက်ထပ်ရှိသေးသည်.
5. Theta Variant ကိုကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းသည်အကောင်းဆုံးကာကွယ်မှုဖြစ်သည်.
UCL မှမိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ရန်သင်အရေးအကြီးဆုံးမှာအပြည့်အ ၀ ကာကွယ်ဆေးထိုးရန်ဖြစ်သည်, ဆရာဝန်တွေကပြောတယ်. ဤအချက်မှာ, ဆိုလိုသည်မှာသင်သည် Pfizer သို့မဟုတ် Moderna ကဲ့သို့ကာကွယ်ဆေးနှစ်လုံးထိုးလျှင်ဆိုလိုသည်, ဥပမာ, သင်ရိုက်ချက်နှစ်ခုလုံးကိုရယူပြီးထိုရိုက်ချက်များအပြည့်အ ၀ ရရှိရန်အကြံပြုထားသည့်နှစ်ပတ်တာကာလကိုစောင့်ရပါမည်.
ကာကွယ်ဆေးအပြည့်အဝထိုးထားသောသူများသည်အခြားသူများသို့ကူးစက်နိုင်သည်, ဒါပေမယ့် UCL ကကာကွယ်ဆေးထိုးထားတဲ့လူတွေမှာဗိုင်းရပ်စ်မျိုးရိုးဗီဇပမာဏကပိုမြန်မြန်ကျဆင်းသွားနိုင်တယ် Epsilon မူကွဲ- ဒါကြောင့်, ၎င်းတို့သည်ကာကွယ်ဆေးမထိုးထားသောလူများကဲ့သို့သူတို့၏နှာခေါင်းနှင့်လည်ချောင်းတို့တွင်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးပမာဏတူညီစွာသယ်ဆောင်နေသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်, လေ့လာမှုအရကာကွယ်ဆေးမထိုးထားတဲ့သူတွေထက်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကအချိန်နည်းနိုင်တယ်.
နောက်ဆုံးပေါ်မွမ်းမံခဲ့သည် ဒီဇင်ဘာ 23, 2020 အားဖြင့် Harley လမ်းဆေးခန်း
ပုဂ္ဂလိက Coronavirus စစ်ဆေးခြင်းကို Harley လမ်းဆေးခန်းများစွာတွင်ရရှိနိုင်ပြီး Roche SARS-CoV-2 serology assay test kit များကို ၀ ယ်ယူရန်ရရှိနိုင်ပါသည်။
လောလောဆယ်ဆေးရုံရှိလူများသာ Coronavirus ကိုစမ်းသပ်နေသော်လည်းသင် Roche Covid-19 စစ်ဆေးမှုကိုသင်ဝယ်ယူနိုင်သည်.
သငျသညျရောဂါလက္ခဏာတွေရှိသည်နှင့်သင်ဗိုင်းရပ်စ်ရှိပါကသင်သေချာမသိရှိပါက, သငျသညျကောငျးမှနျစှာရှာနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ – သင် NHS များအတွက်အလုပ်လုပ်နေလျှင်ပင်.
ဗြိတိန်အစိုးရကျော်ပြောပါတယ် 100,000 လူတွေကိုဒါဝေး coronavirus Covid အဘို့စမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့ 19
ကနျြးမာရေးအာဏာပိုင်များကြည့်ဖို့လိုသည် 100,000 လေးပတ်အတွင်းတစ်နေ့အမှုကိုပြုခံရစမ်းသပ်မှု.
တစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့်၎င်း၊
ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောလူ ဦး ရေတွင်ဗိုင်းရပ်စ်မည်မျှပျံ့နှံ့သွားသည်ကိုနားလည်ရန်ကြိုးစားရန်.
ပုဂ္ဂလိက coronavirus စမ်းသပ်ခြင်း အတွက်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါ Harley စိန့်ဆေးခန်း ဤတစ် Covid မှတဆင့်စွန့်စားမှုအများဆုံးသူတို့ကိုယ်သူတို့မြင်သောသူတို့အားအာမခံပေးသွားမှာပါ 19 test kit.
ပုဂ္ဂလိက coronavirus စမ်းသပ်ကုန်ကျစရိတ်£ 350 နှင့် coronavirus စမ်းသပ်ပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်ဘယ်လိုအသေးစိတ်ကိုအောက်တွင်တွေ့နိုင်ပါသည်.
အဆိုပါစမ်းသပ်ကိရိယာအစုံပြီးတော့ခုနစျပါးမှဆယ်ရက်အတွင်းကြောင့်ရလဒ်များမှာအတူပို့စ်ထဲမှာပြန်လာတဲ့သူလူနာ posted နှင့်သင်တစ်ဦးကို download စက်ရုံမှတဆင့် Covid-19 ရှိပါကဤသူသည်သင်တို့ကိုပြောပြလိမ့်မယ်.
Private Roche Coronavirus စစ်ဆေးမှုဆိုတာဘာလဲ?
ပုဂ္ဂလိက Corona ဗိုင်းရပ်စ်စမ်းသပ်ပစ္စည်းများသင်လက်ရှိဗိုင်းရပ်စ်ရှိမရှိအကဲဖြတ်.
အဆိုပါ Covid 19 စမ်းသပ်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကချွတ်တိုက်ထုတ်ဖို့အတွက်တိကျတဲ့ပဋိရှိပြီးပဋိ၏ရှေ့မှောက်တွင်သင်သည်အတိတ်ကာလအတွင်းဗိုင်းရပ်စ်ပိုးခဲ့ပြီးပြီကွောငျးဖျောပွသရှိမရှိဆိုရလိမ့်မယ်.
ဗိုင်းရပ်စ်မည်မျှရှိသည်ကိုသိရှိထားခြင်းဖြင့်အာဏာပိုင်များသည်၎င်းပျံ့နှံ့မှုကိုမော်ဒယ်လ်ကိုအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်. ၎င်းသည်လက်ရှိတွင်ခုခံအားကျဆင်းနေသောလူ ဦး ရေအချိုးအစားကိုခန့်မှန်းရန်လည်းအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်.
ပုံမှန်နှင့်ကျယ်ပြန့်စမ်းသပ်ခြင်းဖြစ်ပွားနှေးကွေးခြင်းနှင့် coronavirus ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တုပ်ကွေးရောဂါစီမံခန့်ခွဲခြင်းအတွက်အရေးပါခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်တွေ့ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုမှုအလွန်ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့တွင် track record နှင့်အတူကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးမားဆုံးစမ်းသပ်ဓါတ်ခွဲခန်း၏တဦးတည်းအားဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးကြောင်းအဆိုပါစမ်းသပ်မှု.
အဆိုပါစမ်းသပ်မှုသေစေလောက် Covid-19 ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများအကြားခွဲခြားပါလိမ့်မယ်တဲ့ panel ကိုစမ်းသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး 11 တူညီတဲ့လက္ခဏာတွေနဲ့အတူအခြားအမဟုတ်သောသေစေလောက်ဗိုင်းရပ်စ်.
Roche Covid 19 စမ်းသပ်
အားလုံးတစ်ခါတလေ, လူနာအတွက် Harley စိန့်ဆေးခန်းကကြီးကြပ်သောအပြည့်အဝလက်တွေ့ထောက်ခံမှုရှိသင့်.
စမ်းသပ်မှုအမိန့်ထုတ်ထားပြီးပြီးတာနဲ့, ကိရိယာအစုံစမ်းသပ်သည့် Corona ဗိုင်းရပ်စ်လူနာအိမ်သို့မဟုတ်နှစ်သက်သောလိပ်စာ posted ဖြစ်ပါတယ်.
စမ်းသပ်နမူနာကိုပေးထားတဲ့ box ထဲမှာထည့်ပြီးညွှန်ကြားချက်အတိုင်းပြန်တင်ထားသည်.
စမ်းသပ်မှုနမူနာ Covid-19 တို့အတွက်အပြုသဘောဆောင်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်လျှင်အပြည့်အဝ post ကိုစမ်းသပ်ညှိနှိုင်းလူနာများအတွက်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်.
အဆိုပါစမ်းသပ်မှုရလဒ်များသည်ပုံမှန်အားဖြင့်အတွင်းရရှိနိုင်ဖြစ်သင့်7ရက်ပေါင်း.
positive Covid-19 ရလဒ်များနှင့်အတူမျှဝေပါလိမ့်မည် NHS ဒါကြောင့်တစ်ဦး Notifier ရောဂါဖြစ်ပါသည်အဖြစ်အမှုပေါင်းစနစ်တကျခြေရာခံနိုင်.